Nagu saabsan - Duoduo International Development Co., Ltd.
Duoduo International Development Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2013. Waxaan ku takhasusay soo saarista iyo qaybinta gawaarida bagaashka kala duwan, gawaarida gawaarida lagu qaado, gawaarida wax iibsiga, gawaarida gawaarida, gawaarida ujeedooyinka badan leh iyo taxane kale, in ka badan 100 nooc oo wax soo saar ah. Shirkaddu waxay soo saartaa badeecooyin cusub si ay u qanciso baahida suuqa sannad kasta.
Waxaan leenahay xariiq xariiq ah, xariijin alxanka, xariijin laabaya, xariiq cirbid ah oo cirbadeyn ah, xariiqda daaweynta dusha sare, khadka isku imaatinka, xariiqda baaritaanka iyo khadadka kale ee wax soosaarka xirfadleyda ah haatan.
Waxaan ku guuleysanay kalsoonida iyo ka raali ahaanshaha macaamiil badan sababtoo ah sharaf wanaag, adeeg xirfadeed iyo xakameyn tayo sare leh. Ujeedadayada adeegyadeedu waa: nashqadeyn heer sare ah iyo soo saarid, muuqaal qurxoon, tayo leh oo xasiloon. Hadda, Magaalada Yiwu International Trade City, caasimadda adduunka, waxaan ku leenahay dukaamadeenna tooska ah waxaana naloo siiyay cinwaanka "alaab-qeybiyaha muhiimka ah" suuqa. Waxaan leenahay xoog R & D madax-bannaan iyo heer adeeg heer sare ah, soo dhowow saaxiibbada adduunka oo dhan si ay ugala xaajoodaan ganacsiga.
Waxaan ku faraxsanahay tayada iyo joogteynta alaabta iyo adeegga la siiyay macaamiisheenna waxaanan halkan u nimid inaan ka dhigno khibraddaada wax iibsiga khadka tooska ah heer sare. Dukaankayaga internetka, waxaa jira xulasho weyn. Iyada oo sannado badan oo waayo-aragnimo ah xiriirka tooska ah la leh alaab-soo-saaraha iyo macaamiisheena, waxaan had iyo jeer muujineynaa xirfadeena si aad u dareento fiicnaan markaad wax ka iibsaneyso halkan.
Amarada oo dhan waxaa loola dhaqmaa sida ugu taxaddarka badan si loo daboolo baahiyaha. Waxaan qadarinaynaa ahmiyada iibsigaaga, taas oo ah sababta aan kaliya u iibino alaabooyin cusub, oo aan la furin, oo aan la isticmaalin oo si toos ah nooga dalbanaya soo saaraha. Macaamiisheennu waxay filayaan, oo had iyo jeer heli doonaan, sheyga tayada sare leh markay nala dalbanayaan. Hadafkeenu waa inaan siino macaamiisheena alaabada saxda ah ee qiimaha saxda ah, oo lagu bixiyo waqtiga.
Waxaan haynaa koox adeeg macmiil oo awood leh oo isha ku haysa dhammaan nidaamka iibka. Kooxda marwalba diyaar ayey u tahay kuna faraxsan tahay inay ku caawiso, xalliso soo noqoshadaada oo aad bedesho, dhageysato cabashooyinkaaga. Kooxdayada adeegga waxay ku dhegan tahay tilmaamteeda.